RASMI: UEFA Oo Ku Dhawaaqday Liiska Musharixiinta Ciyaartoydii Ugu Fiicnayd Kulamadii Lugtii Hore Ee Kulamadii Champions League Ee Todobaadkan. - Gool24.Net
RASMI: UEFA Oo Ku Dhawaaqday Liiska Musharixiinta Ciyaartoydii Ugu Fiicnayd Kulamadii Lugtii Hore Ee Kulamadii Champions League Ee Todobaadkan.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u shaaciyay liiska musharixiinta ciyaartoyda kulamadii lugta hore ee wareega 16ka kooxood ee Champions League ugu fiicnaa gaar ahaan kulamadii talaadaadii iyo arbacadii la ciyaaray.
UEFA ayaa soo saartay liiska afar ciyaartoy oo bandhig fiican ka sameeyay kulamadii Champions League ee la soo ciyaaray waxayna jamaahiirta kubbada cagta aduunka ugu soo bandhigeen in ay codkooda ku go’aamiyaan midka noqon doona kan ugu fiican ee xidiga todobaadka Champions league.
Waxaa liiska ciyaartoyda todobaadka ee Champions league ugu fiican hogaaminaya xidiga kooxda PSG ee Marco Verratti kaas oo si layaableh u qabsaday khadka dhexe ee kulankii Old Trafford ee ay PSG guusha ka soo gaadhay Man United.
Waxa kale oo liiskan ku soo baxay goolhaye Thibaut Courtois oo sabab wayn u ahaa in Real Madrid ayna xalay guuldaro kala soo kulmin Ajax wuxuuna Los Blancos siiyay fursada ay ciyaarta baaqi ugu sii ahaayeen si ay ugu danbayn xili xaasaasi ah guul u soo gaadhaan wuxuuna Courtois badbaadiyay fursado cadaan ah oo ay Ajax goolal dhawr ah ku heli kartay.
Xidiga kooxda AS Roma ee Zaniolo oo laba gool ka dhaliyay kulankii FC Porto ayaa isna ku soo baxay liiska musharixiinta ciyaartoyda todobaadka ee Champions league ugu fiicnaa.
Ugu danbayn difaaca dhexe ee kooxda Tottenham ee Vertonghen oo wacdaro ka dhigay kulankii Borussia Dortmund isla markaana gool ka dhaliyay ayaa liiskan dhamaystiray.
Miyaad doonaysaa in ay ka mid noqoto jamaahiirta kubbada cagta caalamka ee go’aaminaya xidiga todobaadka ee Champions League ugu fiican? Haddii ay jawaabtu haa tahay, waxaad ka codayn kartaa shabakada rasmiga ah ee UEFA. u codee xidiga todobaadka Champions league.